မနေ့က ဘာရယ်မဟုတ် တီဗွီရှေ့ ထိုင်ရင်း Sister's keeper ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်လေး ကြည့်မိခဲ့တယ်။ ကင်ဆာဝေဒနာသည် သမီးကြီးအတွက် မိသားစုဝင်တွေ အားလုံး ကူညီပေးဆပ်ခဲ့ကြပုံတွေ.. မိခင်တယောက်အနေနဲ့ သမီးအသက်ကို ဆွဲဆန့်ဖို့ပဲ မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ တခြား ဘယ်သူ့က်ုမှ ဘယ်အရာက်ုမှ ထည့်မတွက်တော့တဲ့ ပြင်းပြထက်သန်တဲ့ ဆန္ဒ... နောက်ဆုံး ကာယကံရှင် သမီးက သူ့တွက် ထိခိုက်ပေးဆပ်ခဲ့ကြတဲ့ မိသားစုတွေအပေါ် ကျေးဇူးတင်အားနာရင်း သူ့ကို လွှတ်ပေးလိုက်ဖို့သာ တောင်းဆိုလာတော့တယ်..
ဆက်စပ်ရင်း ပုံ့လေးကို သတိရမိတယ်... ဘဝတွေ.....
ဒီနေ့မနက် သမီးသူငယ်ချင်းရဲ့ အမေ အသုဘ လိုက်ပို့ဖြစ်တယ်။ သိပ်ထက်မြက် ဖြတ်လတ် သွက်လက်တဲ့လအမျိုးသမီးပေါ့... အနာဂတ်ကောင်းတွေ (သူ့အတွက်သာမက) အသိုင်းအဝိုင်းကိုပါ မျှဝေမြှင့်တင်ပေးနေတဲ့ အမျိုးသမီး... ကလေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မျက်မှန်းတန်း သိကြရုံဆိုပေမယ့် သူ့ရဲ့ ထက်မြက်သွက်လက်တာတွေကို သဘောကျ အားကျခဲ့တယ်... inner က လာတဲ့ စိတ်အားတက်ကြွ ယုံကြည်လှုပ်ရှားမှုတွေ....
သာယာလှပတဲ့ မိသားစုဘဝလေးရယ်...အဲဒီလိုပဲ ကြည့်နေရင်းနဲ့ သမီးငယ်က သူ့သူငယ်ချင်းမေမေမှာ အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကြားတော့ ... ကိုယ် သိခဲ့တဲ့ ကျန်းမာရေးလိုက်စားတဲ့ စမတ်ကျကျ လှလှပပ အမျိုးသမီးလေး...ကိုယ် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်... မမြဲတဲ့တရားဆိုတာ လူတိုင်းနဲ့ ဆိုင်ပေမယ့် ကိုယ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သူတွေကိုတောင် သာယာလှပနေတဲ့ အသိုက်အမြုံလေးတွေ မပျက်စီးစေချင်မိဘူး... အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ မိခင်နေရာ အလိုလို ရောက်သွားတော့ ... အို... ကိုယ် ဝမ်းနည်းလို့ မဆုံးဘူး...
ကိုယ် စိတ်ဝင်စားတဲ့ အဲဒီအမျိုးသမီး သူ့နောက်ဆုံးအချိန်တွေ အသုံးချသွားတာလည်း လေးစားချီးကျူးမိပါရဲ့.... မိသားစုအနေနဲ့ ဒေါက်တိုင်တစ်ခု ယိုင်နဲ့ပျက်စီးသွားရင် ပုံမှန်အတိုင်းရှိဖို့ ဘယ်ဖြစ်နိုင်ပါတော့မလဲလေ....
မဖြစ်မနေ ကိုယ်က စောထွက်ရမယ့် ခရီးအတွက် သူ တတ်အားသမျှ ဒါန သီလ အထူးသဖြင့် ဘာဝနာတရားတွေ ကျင့်ကြံအားထုတ်ရင်း သံသရာခရီးအတွက် သူ ထောက်တည်ရာ တခု အပါ သယ်သွားနိုင်ခဲ့တယ်။
ကျန်ရစ်သူ သမီး နဲ့ သားအတွက် အမေဆိုတာ အစားထိုးမရတဲ့အတွက် ကလေးတွေဘေးမှာ ဆက်ရပ်တည်မပေးနိုင်တော့တဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။
ဒီလိုပါပဲ... တယောက်တည်းလာခဲ့တဲ့ ခရီးမှာ တယောက်ထဲပဲ ထွက်သွားရမှာပါပဲ....ဘယ်ကလာမှန်း မသိပေမယ့် ဘယ်ကိုသွားရမလဲဆိုတာေ တာ့ ကိုယ်တွေရွေးချယ်မှုပါပဲ.....
အတ္တတွေ လောဘ ဒေါသတွေ မာနတွေနဲ့ ပူလောင်မှုတွေ ဆက်သယ်သွားကြဦးမလား....
ဖန်သားပြင်ပေါ်က ဘဝတွေရယ်.. အပြင်လောက က ရုပ်ရှင်တွေ..... ကိုယ်တိုင် ရွက်လွှင့်နေတဲ့ သံသရာရဲ့ ခရီးသည် မှတ်တမ်း တပိုင်းတစပေါ့....
၁၆၀၆၂၀၂၀ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ကိုဗစ် နိုင်တင်းကြောင့် လည်ပတ်နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးဟာ ရုတ်တရက် ဆိုသလို ပြောင်းလဲသွားခဲ့ကြရတော့တယ်... ဘယ်အရာတွေ အရေးကြီးတယ...
မောင်လူအေး လိုမျိုး ကိုယ့် ဇာတ်လိုက်ကို နံမယ်ပေးဖို့ စဉ်းစားနေတယ်။ ချစ်သူဘဝက ခေါ်တဲ့ နာမ်စားကို သုံးမလား။ မေလေး ဆိုတာက သိပ်နုနေသလိ...
အမွတ္တရ သဇင္ (၂)
သဇင္ကို က်မတုိ႔ လြမ္းတယ္ဆုိရင္ သူမ်ားေေတြကေတာ့ ဘယ္ႏွယ္… ျခံဳႏြယ္ပိတ္ေပါင္းေတြၾကားထဲက မဲြေတေတ အဆင္းမလွ သည္ သဇင္ေဆာင္မ်ား ဘာလြမ္းေလာက္လို႔လဲေပ...
ဆရာႀကီးေဇာ္ဂ်ီ ရဲ႕ သူ႔အျပံဳး
(ကုိေဇာ္ေမာင္ရဲ႕ လက္ရာပါ) သူ႔အျပံဳး.... ငါ႔ညီေျပာင္၀င္း၊ ေမာင္သစ္ဆင္း မင္းကို သူမဲ၊ လူပံုထဲ၌ ဆိုဆဲ ရိုင္းျပ၊ သူ ရန္စ လည္း မင္းက မျဖံ...
ရေးခဲ့သမျှ...... July (3) October (9) November (10) December (5) January (8) February (11) March (9) April (3) May (3) June (9) July (24) August (25) September (16) October (16) November (11) December (16) January (21) February (7) March (5) April (5) May (5) June (7) July (1) August (5) September (9) October (3) November (1) December (1) January (1) March (1) May (1) June (3) July (2) August (1) September (1) October (1) March (1) April (1) May (1) June (1) July (1) August (1) August (1) January (1) July (1) September (1) October (1) November (1) December (2) June (1) September (1) December (1) July (1) November (1) May (1) June (3)
“သိပၸံေမာင္၀ ၏ စာမ်ား” (1)
မကောင်းမှု ရှောင် ကောင်းမှု ဆောင် ဖြူအောင် စိတ်ကိုထား...
ပူဇော်အထူးကို ခံယူတော် မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား၊
ကိလေသာ ကင်းစင်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။ မကောင်းမှုဟူသမျှကို ဆိတ်ကွယ်ရာ အရပ်၌ပင် ပြုတော်မမူသော မြတ်စွာဘုရား။
tg.nwai@gmail.com. Picture Window theme. Powered by Blogger.